Home News Al-shabaab oo xiray dhalinyaro aad u badan!!
Al-shabaab oo xiray dhalinyaro aad u badan!!
Sida warka aynu heleeyno Shabaab ayaa xiray 15 ruux oo dhalinyaro u badan oo ay ku eedeyeen in ay xiriiro dhaw la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhalinyaradaan ayey shabaab kasoo xireen deegaanka Mubaarak iyo deegano ku dhaw dhaw oo ka tirsan Gobolka Shabeelada Hoose.
Waalidiinta dhalay dhalinyarada Shabaab ay soo xirteyn ayaa qaba walaac xoogan, waxa ayna ka baqdin qabaan waxa u dambeyn doona dhalaankooda.
Shabaab ayaa iyagu xukuno adag oo dil uu ku jiro ku fuliya dadka ay kaga shakiyaan in ay xiriiro dhaw la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya.